Homeस्वास्थ्ययो हो आँखाको दृष्टि बढाउने सरल उपाय
March 31, 2021 Desk 1 स्वास्थ्य
काठमाडाैं, तपाईं आँखाको दृष्टि बढाउनका लागि उपायहरू खोज्दै हुनुहुन्छ ? आँखा कमजोर छन् भने त्यसलाई बलियो बनाउनका लागि सरल र प्राकृतिक अभ्यासको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यहाँ बताइएका उपाय अपनाउनुभयो भने तपाईंले चश्मा प्रयोग नगरिकनै दृष्टि बढाउन सक्नुहुन्छ ।
त्राटक गर्न थाल्नुस् । तर १२ देखि १५ मिनेटभन्दा बढी नगर्नुस् । एजेन्सी
घाँस काट्न निस्केका ८ जना बेपत्ता,